Safa, 30 taona, Mananotena, Mitantara Amintsika Ny Fifindrany Monina Tao Siria · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Act For Ghouta Nandika (en) i Act For Ghouta, Kévin Marceau, Candy
Voadika ny 06 Aogositra 2018 15:29 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Français, Ελληνικά, Español, 繁體中文, Italiano, عربي
Safa sy ireo zanany fotoana fohy mialohan'ny nandaozany an'i Jobar, ao Ghouta atsinanana. Sarin'i Safa, fampiasàna nahazoana alalana.
Safa no anarako ary efa ho 30 taona izay no nahaterahako. Ankehitriny, renim-pianakaviana niteraka telo aho: dimy taona ny lahimatoa, ary latsaky ny herintaona ny faralahy. Telovolana lasa izay, novonoin'ireo herimpamoretan'i Bachar el-Assad ny vadiko nandritra ireo daroka baomba tsy nisy fiafaràna tao an-tanànanay, manakaiky an'i Jobar, ao Ghouta atsinanana. Irery aho ankehitriny, malahelo ary mivalaketraka.
Nanomboka indray alakamisy izay ny tantarako. Alakamisy izay nampisaraka an'ireo taonan'ny fahirano, ny zera baomba sy ny fahafatesana, tamin'ny hoavy tsy fantatra. Nanomboka ny tantarako raha vao nametra-beloma taminay ireo lehilahy mialohan'ny handehanany hiatrika ady. Izahay, ireo vehivavy ary ireo ankizy, dia samy nijanona lavitra ny vava-ady tao Jobar. Tsy nanan-tsafidy hafa izahay afatsy ny fiandrasana tanaty tahotra an'ireo zera baomba mampihoron-koditra sy tsy misy fitsaharany izay nanery anay tsy hitsahatra ny hifindra toerana mba hidifiana ny fahafatesana hafa tsy isalasalana.
Indray zoma maraina niverina ireo lehilahy, nialohavana hakiviana, Nambaran'ireo filohany ny tsy fahombiazan'izy ireo. Nidika izay fa omena ny fitondrana el-Assad ireo faritra mpikomy ary ho voaroaka eto amin'ny misy anay izahay. Tsy nanana fanantenana intsony izahay ny hiarovanay tena sy hahafahanay miaina ary mba ho faty eto amin'ny tany izay naha-lehibe anay. Voatery handao ny tanàna izay nanome anay ireo sekoliny sy namàhana anay izahay, voatery handao ireo faritra izay tao no nilalaovanay, ireo mponina izay nifandray tamim-pirahalahiana sy ireo tranobe izay niasànay. Tonga ny ora hametrahana veloma sy handehanana.
Toa izay no nahatongavan'ny fotoana niaingànay, tsy nanana teny ho ambara mikasika ny anjaranay, tsy nisy nanontany izay mba fanirianay. Angamba, naniry ny handeha ireo sasantsasany taminay, saingy ireo sasany kosa te-hijanona, nionona nanaiky ny fiainana teo ambany ziogan'ny fitondrana izay namono, namindra toerana, nampijaly sy nanao fahirano ny vahoakany. Saingy tsy nisy mihitsy nanontany ny hevitray, sahala amin'ny toa tsy ny ainay no resahana.
Voatery manao sesitany ny tenanay izahay mba hiarovanay ny maha-izahay anay, ny fahamendrehanay sy ny fahalalahanay. Saingy mangirifiry io tsy rariny io ; mandoro ny fahatsiarovako, na farafaharatsiny izay sisa tavela.
Nanatona ny misy anay ireo herimpamoretan'i Bachar el-Assad indray zoma tolakandro. Tamin'ny marainan'io, nandevina an'i Mostafa izahay, ilay anadahikeliko vao 14 taona. Navorinay ireo entana sasantsasany mba hiomànanay handeha. Tamin'ny fahatongavan'ireo herimpamoretana an'ny fitondrana, nitsoaka ireo mpihoko, nandositra ireo olobe tao antanàna ary izahay irery no tavela teo niatrika ny tsy fantatra.
Rodorodo mikorontana nataon'ireo olona very hevitra no nitranga nanoloana ny trano, nivingitra harona, tsy mahalala akory izay ho alehany. Nifanontany tena nifamalivaly ny tsirairay: “Ho aiza isika? Ho aiza ireo fiara fitaterana?”.
Nankany Jobar izahay, tanin'ireo razambenay, tany izay nopotehan'i Bachar el-Assad sy ireo fitaovampiadiany ary ny tafiny, tany izay nanohitra hatry ny ela ary nampihoroho an'ireo hery ireo ihany, ireo milisy ary ireo tafika mpiaradia. Io tany tsara tarehy io izay nandray anay nandritra ireo andronay farany tao Ghouta atsinanana.
Nanomboka tao Jobar ny fahasarotan'ny fitadiavana fiara fitaterana hamindràna an'ireo olona voatery handeha hiaina an-tsesitany sy ireo fomba hialàna ny toerana. Fantatray fa any an-tanànan'i Arbin no misy an'ireo fiara maitso fitaterana ary ireo izay maniry izany dia tsy maintsy mandeha any ary miandry ny anjarany eny amorondalana. Nanjaka ny fifanjevoana goavana. Tsy azo antoka ny hahazoana vaovao mazava mikasika ireo toerana handehanana na ireo fifanarahana.
Telo andro izahay no nijanona tao Jobar teo ankilan'ireo martiora malalanay: ny vadiko, ny anadahiko ary ny zanaky ny mpiray tampo amiko. Nandany telo andro izahay teo ankilan'ny fasan'izy ireo, niresaka tamin'izy ireo, nitomany ny fahafatesan'izy ireo ary nanao veloma azy ireo. Nifanena tamin'ireo havanay izahay tany ary ireo havana hafa ihany koa, sahala aminay, nanao veloma an'ireo hava-malalany efa maty.
Nentina tany Arbin nadalo tamin'i Zamalka izahay. Mandrotika fo ireo tontolo hitanay maso. Ireo olona, tsy afa-manoatra, natory teny an'arabe.
Mba hahazoana toerana ao anaty fiara fitaterana, ny fiangarana no manjaka. Na efa ao anatina trangan-javatra sahala amin'izany aza, mbola mahazo laka hatrany ny kolikoly. Nosoratanay teny amin'ireo toeram-piambenana marobe ny anaranay, noho ny tahotra ny tsy hahatafavoahanay.
Tonga tao Arbin ny andiana fiara fitaterana iray, teo amin'ny toerana voaara-mason'ny iray amin'ireo mpiambina ao Ghouta atsinanana. Maika ery aho nitondra ny roa tamin'ireo zanako, raha nihazakazaka teo ankilako ilay fahatelo nandramby an'ireo fitafiako. Mbola tsy nahita zavatra toa izany aho taloha: vahoaka tsy tambo ho isaina, ny tahotra sy ny horohoro eny rehetra eny. Toa mbola reko foana ireo zanako mitomany isaky ny miverina mieritreritra izany aho.
Nanome tombony mialoha an'ireo havany sy ireo namany ireo tomponandraikitra izay nandamina ny fiakarana ao anaty fiara fitaterana. Nantsoin'izy ireo tamin'ny anarany izy ireo ary maika ery izy ireo manavatsava ny vahoaka manosika an'ireo vehivavy sy ankizy, manitsaka an'ireo izay eny amin'ny tany. Tsy misy mahalala akory izay zava-nitranga. Ny zavatra tokana manan-danja dia ny famonjena ny ain'ny tena.
Rehefa avy nijaly ora iray mahery manoloana ny varavaran'ny fiara fitaterana, voatositosika tsy nisy fitsaharany nataon'ireto vahoaka, tafita tao anaty fiara fitaterana ihany izahay, fiara izay hitondra anay ho any amin'ny toerana tsy fantatra. Io fiara fitaterana io ihany no nitondra anay nitsangatsangana indray taonam-pahavaratra, teny amoron-dranomasina mba hisitraka ny hatsaran'ity firenena ity, izay mandà anay indray amin'izao fotoana izao. Io fiara fitaterana io ihany no nitatitra anay tany amina toerana tsy fantatra izay mampalahelo anay ankehitriny, kivy sy nijaly tafahoatra. “Iza no hampiantrano anay? Aiza izahay no honina? Aiza izahay no hatory?” Fanontaniana marobe izay nanahirana ahy tamin'io andro io.
Niha-nanalavitra ilay fiara fitaterana. Io no fotoana farany nahitanay ireo fatin-korontana izay tao ambaniny tao izahay no niaina ary nsks ny ankabeazan'ireo havanay, fotoana farany izay nifohanay io rivotrs feno fofom-paty io.
Tonga tamina toerana famoriana voalohany ny fiara fitaterana ary nipoitra teo alohanay ireo nipetraka tao: izy ireo ihany izay namafa ny fandavako tsy handeha any Ghouta mba hahafahako manohy ny fianarako, satria nokatsahako tamin'ny heriko rehetra ny tsy hifanena amin'ìzy ireo. Nifanatri-tava izahay ankehitriny. Notanako ny fiziriziriako, nitazona ny fijeriko ho malalaka, manohitra ny jadon'izy ireo ary milaza ao an-tsaiko hoe: “Mpandresy aho. Tsy naharesy ahy mihitsy ianareo na dia manana fitaovam-piadiana aza, ry ilay mpamono olona ireto.”
Teo amin'ny paositra fanarahamaso, rosiana iray manamboninahitra no niakatra ny fiara fitaterana ary niarahaba anay tongasoa tamim-pitsikiana, toy ny hoe ampy izany hanadinoanay fa izy no mibodo ireo tranonay. Niakatra tamin'ny fiara fitaterana avy eo ireo mpiasa siriana, lahy sy vavy. Naneho ny tahotr'izy ireo ny masony, raha ny masonay kosa manipy hery sy tsy fankatoavana. Eny, very ny taninay, saingy tsy very kosa ny fahamendrehanay, ny maha-izahay anay sy ny haja nomrenay ny tenanay.
Nandroso avy teo amin'ny paositra fanarahamaso ireo fiara fitaterana, hatreny amin'ny toerana famoriana. Rehefa tonga teo, tsy maintsy niandry ny fahatongavan'ireo fiara fitaterana hafa mialoha ny hanaovana diabe miaraka amin'ny alina.
Tonga tao Damas ny fiara nitondra anay, Damas malalako. Hitako ihany izy nony farany, na dia tsy afaka araka izay naniriako azy aza, voafatotr'ilay mpiambina fonja tsy vanona. Damas-ko io, ny taniko sy an'ireo razambeko. Damas malalako miaraka amin'ireo làlana, ireo arabe, ireo sisin-dàlany ary ny voninkazo ‘jasmin’-ny. Tsy mifaditrovana ity sehatra fanaovam-beloma ity! Nihozonozona tamin'ny ràn'ireo maritiorako aho fa mbola hiverina eto indray andro any. Eny, hiverina eto aho. Oh… mitomany ny foko ary vonton-dranomaso ireo masoko.
Nanavatsava an'ireo araben'i Damas ny fiara fitaterana, teny ireo olona no nibanjina anay. Nitory alahelo ny masonìny sasany, alahelo noho ny fifindran-toerana an-terisetra natao taminay, ireo endrika hafa naneho hafaliana sy hehy, ary ireo hafa nanebaka. Ireo sasany nanofahofa ny tanany taminay, fa ireo hafa nampatsiahy tahotra sy fisalsasalàna. Nanofahofa tànana azy ireo aho, hiverina aho, nampanantena izany ho tamin'ny tenako aho sy ireo izay nilaozako ao ambanin'ity tany masina ity.
Niainga ny andiana fiara fitaterana handeha ho any amin'ny toerana tsy fantatra. Teny andalana, nanevateva anay ireo olona sasany ary nanipy vato. Avy eny amin'ny fiaran'ireo milisy an'ny fitondrana el-Assad, torahan'ireo olona tany izahay naka sary ary naneso anay. Tsy fantany fa afapo ny fanahinay ary tsy misy tohina ny fahamendrehanay..
Mikisaka sahala amin'ny sokatra ny fandehan'ilay andiana fiara fitaterana, tonga tao Qalat al-Madiq, reraky ny fijaliana noho ireo ora maro nipetrahana tamin'ireo seza tery ny vatanay. Nitomany ireo zaza ary valaka ireo olondehibe, tratry ny fandoavana, fanina sy matahotra. Io no fandehanana henjana indrindra ho an'ny ankamaroanay, fitsangatsanganana iray ela be sy sarotra namakivaky ireo zavaboahary tsara tarehy an'ilay Siria malalanay.
Efa voalahatra fa handalo an'ireo faritra manohana ny fitondrana izahay. Nanemitra ny andaniny roa amin'ny lalana ireo olona, nitora-bato anay, nikasa ny hamotika an'ireo fitaratra eo ambony lohanay sady nihiakiaka an'ireo teny mankarary naneho ny haben'ny haratsian-dry zareo. Tony izahay nefa sorena tao anaty fiara fitaterana, rotiky ny fahoriantsaina sy ny alahelo.
Tao an-tanànan'i al-Madiq, tamin'ny hatsaram-panahy sy tamim-pitiavana no nandraisan’ ireo olona anay, fandraisana iray izay nampitony ny fijalianay. Nanampy anay izy ireo nitondra ny valizinay hatreny amin'ny fiara fitaterana iray izay tsy hay ihany koa ny toerana haleha, saingy toa nitodi-doha hankany amin'ny toerana fandraisana iray. Fandehanana tsy manam-piafaràna re izany!
Eto, samihafa ny lalana. Mamiratra ny masoandro ary mandefa taratra ho amin'ny lafy rehetra, trangan-javatra iray mahafinaritra. Tsy nipi-maso mihitsy izahay na tao aza ny havizanana be. Taorian'ny efatra amby roapolo ora teny an-dalana, tonga tamin'ny toerana farany hitodianay izahay: ny maoske al-Rhaman miorina ao an-tanàna an'i Idlib.
Tadidionareo ny tantarako. Safa no anarako ary 30 izao no nahaterahako. Noroahana niala tamin'ny fonenanay izaho sy ireo zanako telo. Irery aho ankehitriny, malahelo ary ketraka.
Nandika (en) i Act For Ghouta
Nandika (fr) i Kévin Marceau